စိန္တေသိကိုမှ မကြံနိုင်ခင် ပုစ္ဆေသိ မေးပြန်သည်
စိန်ကောင်း ကျောက်ကောင်း ရောင်းဝယ်ရာ ဆေးရိုးသည်က ကန့်လန့်ကန့်လန့်
ဆင်ဖြူတော် ဝင်မှာ ချည်တစ်ခင်နှင့် ကျိန်းကျေ
ဆင်ဖြူတော်ဝင်မယ့်ကိန်း ချည်တစ်ခင်နှင့် ကျိန်းကျေ
ဆင်လည်း ဆင့်အထွာနှင့်၊ ပုရွက်ဆိတ်လည်း ပုရွက်ဆိတ်အထွာနှင့်
ဈေးမတတ် ရွာအနှုန်း၊ ဆံထုံးမတတ် ရွာဓလေ့
ညောင်သီးလည်း စား၊ လေးသံလည်း နားထောင်
ညောင်ဦးကမ်းပါးပြို၊ စမ္ပာနဂိုရ်က နွားမပေါင်ကျိုး
တင်းလွန်းလျှင် ပြတ်၊ လျော့လွန်းလျှင် ပတ်
တစ်တောစောင့်သည် ခြေတိုင်ကုပ်ကား၊ တစ်အိုင်စောင့်သည် ငါးရံ့တင်ပြောက်
တိုင်း၍ရက်သည့် ပက္ကလာ မိုးရွာသည်နှင့် အခန့်သင့်
တောင်ကြီး ဖဝါးအောက်၊ လှိုင်းကြီး လှေအောက်
တောင်ငူကလည်း တောင်ငူ၊ မောင်းထောင်ကလည်း မောင်းထောင်
မီးကြီး ငြမ်းခို၊ ကျောက်ကြီး ငါးခို
အန္တော ဂဗ္ဘေ၊ စရေ ဝံသေ၊ ဓာတ်ဖက်ပေ
ဦးဝေစံကူး၊ ရေဘူးတောသူ၊ ဓာတ်ရန်ဟူ
"အဝင်နှင့်အထွက် မမျှမတ ဖြစ်ကာ လခသုံးရာတုန်းကလည်း မလောက်၊ လေးရာရတော့လည်း မလောက်၊ ယခု ငါးရာရသည်အထိလည်းမလောက်၊ ကျားကြီး သလောက် ခြေရာကြီး ခဲ့သည်။" မြဝတီ၊ ၁၈၊ ၃။ ၉၁။
ကျားကြောက်လို့ ရှင်ကြီးကိုး၊ ရှင်ကြီး ကျားထက်ဆိုး
ကျားကို ကြောက်သဖြင့် တောစောင့်နတ်ကို ကိုးခါမှ နတ်က ကျားထက်ပင်ဆိုးသကဲ့သို့ တစ်ဦး၏ရန်က လွတ်မြောက်ရန် အခြားတစ်ဦးကို အားကိုးမိခါမှ မိမိအားကိုးသူက မိမိကို ဒုက္ခပိုရောက်အောင် ပြုလုပ်သည်။ တစ်ခါက မိတ်ဆွေနှစ်ဦးတို့သည် ခရီးအတူသွားကြရာ လမ်းခရီး၌ ညောင်ပင်ကြီ ...
ကျားရဲရန်ကို ရှင်းလင်းရာတွင် ကျားရဲလည်းသေ၊ တောအကြောင်းလည်း နှံ့စပ်ကျေညက်သွားသကဲ့သို့ အလုပ်တစ်ခု ပြုလုပ်ရာတွင် ရည်မှန်းချက် အောင်မြင်သည့်အပြင် အခြားအကျိုးကျေးဇူးကိုလည်း ရရှိသည်။
ကျားရဲရန်ကို ရှင်းလင်းရာတွင် ကျားရဲလည်း သေ၊ တောလည်း ဖွတ်ဖွတ်ကြေအောင် ပျက်စီးသွားသကဲ့သို့ အလုပ်တစ်ခု ပြုလုပ်ရာတွင် ရည်မှန်းချက် အောင်မြင်သော်လည်း ဆုံးရှုံးမှု ကြီးမားသည်။
"နယ်ချဲ့လှိုင်းလုံးကြီး၏ စွမ်းအားကို ခန့်မှန်းခြင်း မပြုနိုင်သောကြောင့် ကျားရှေ့ မှောက်လျက် လဲ သူကဲ့သို့. သီပေါမင်းသည် ပါတော်မူရှာလေသည်။" သွေး၊ ၃၃၇၊ ၃၅။
ကျားကိုသာ ကြောက်ရသည်မဟုတ်၊ ကျားချေးကိုပင်လျှင် ကြောက်ရသကဲ့သို့ မိမိအား နှိပ်စက်နိုင်သော အရှိန်အဝါရှိသူကိုသာ ကြောက်ရသည်မဟုတ်၊ အရှိန်အဝါကို မှီပြီး အာဏာပြနေသော နောက်လိုက်အသိုင်းအဝိုင်းများကိုပါ ကြောက်ရသည်။
ကျားရှေ့ရောက်သော နွားသည် ကျား သနားမှသာ အသက်ချမ်းသာခွင့် ရနိုင်မည်ဖြစ်သကဲ့သို့ အလွန်ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သူ ရှေ့မှောက် ရောက်သူသည် ထိုသူ အနားညှာတာမှသာ ချမ်းသာခွင့် ရနိုင်မည်။
ကျားသေကို အသက်သွင်းသူသည် ထိုကျားကိုက်၍ သေရသကဲ့သို့ စွမ်းအားသတ္တိ မရှိတော့သည့် ရန်သူ ပြိုင်ဘက်စသည်ကို အခွင့်အလမ်း ပေးမိသဖြင့် အန္တရာယ်ကြီးစွာ ပြုခြင်းခံရသည်။ အန္တရာယ်ပေးနိုင်သည့် သူယုတ်မာများကို သွားရောက်ကယ်တင်သောအခါ ထို သူယုတ်မာများကပင် ကျေးဇူးကန ...
အန္တရာယ်ပြုနေသော ကျားကို ကြောက်၍ ထွက်ပြေးပုန်းရှောင်နေကြပြီး ထိုကျားသေမှ လူစွမ်းကောင်းလုပ်လိုသူ ပေါ်ပေါက်သကဲ့သို့ အန္တရာယ်ပေါ်ပေါက်စဉ် ရှောင်နေကြပြီး အန္တရာယ်မရှိတော့သောအခါမှ ဖြေရှင်းမည်ဆိုသူ ထွက်ပေါ်လာသည်။
ကျီးနှင့်ဘုတ်တို့သည် တစ်ကောင်နှင့်တစ်ကောင် လေးစားရိုသေကြသကဲ့သို့ မိမိက သူတစ်ပါးကို ရိုသေလေးစားခြင်းဖြင့် သူတစ်ပါးက မိမိကို ရိုသေလေးစားသည်။ ရှေးအခါက တောအုပ်တစ်ခုတွင် ဘုတ်နှင့်ကျီးတို့ အဆွေခင်ပွန်းဖွဲ့ကာ နေကြသည်။ တစ်နေ့သော် ကျီးသည် ဘုတ်အား အဆွေ၏ အမ ...
ကျီးတစ်ကောင်ကြောင့် ကျီးများ ပျက်စီးရသကဲ့သို့ တစ်ယောက် မကောင်းသောကြောင့် အများပျက်စီးဆုံးရှုံးရသည်။ ရှေးသရောအခါ ဗာရာဏသီပြည် ဗြဟ္မဒတ်မင်း၏ ပုရောဟိတ်သည် ကောင်းစွာ ဝတ်စားဆင်ယင်လျက် မြို့တွင်းသို့ ဝင်လာသည်။ မြို့တံခါးတိုင်ဖျားတွင် နားနေသော ကျီးတစ်ကော ...
ကျူပင်များကို ခုတ်ထွင်ရာတွင် ကျူငုတ်ကျန်နေပါက နောက်ထပ် အသစ်ပေါက်နိုင်သဖြင့် ကျူငုတ်ပါမကျန် ခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းရသကဲ့သို့ ရန်သူကို ချေမှုန်းရာတွင် ရန်ကြွင်း ရန်ငုတ်ပါမကျန်အောင် သုတ်သင်ဖယ်ရှားရသည်။
"ဆင်းရဲသားများကို ကျောက သားလည်း သား၊ ရင်က သားလည်း သား ဆိုတာလို တရားသဖြင့် စိတ်ထားဖို့ နေ့တိုင်း သတိပေးရှာတယ်။" ပြည်သား၊ ၁။ ၁၈။ ၆။
ကျောချမှ ဓားပြမှန်းသိ ၊ ပြောပြမှ မရမှန်းသိ ဆိုတာလို တည့်တည့်ပြောမှ သိတော့မှာ။" မြင်ဝါတောင်။ ၂၂။
ကျွန်ဝယ်ရာတွင် ဝယ်သည့်ကျွန်အပြင် နောက်ထပ်လူပို အဆစ်ပါသွားသကဲ့သို့ တစ်ဦးတစ်ယောက်၏ကိစ္စတွင် တိုက်ရိုက် မပတ်သက်ဘဲနှင့် ပတ်သက်သူကို အကြောင်းပြု၍ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးရသည်။
ကိုင်းပင်များ ပေါက်ရောက်နေသဖြင့်လည်း သောင်ကျွန်းသည် ရေတိုက်စားမှုကို ခံနိုင်ပြီး ရပ်တည်နေနိုင်သည်။ သောင်ကျွန်းတည်ရှိနေသဖြင့်လည်း ကိုင်းပင်များ ပေါက်ရောက်ရှင်သန် ရပ်တည်နိုင်သကဲ့သို့ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးသည်လည်း အပြန်အလှန် အကျိုးပြု၍ အမှီသဟဲပြုကာ ရပ်တည်က ...
"ဥပမာဆိုသော်ကား ရေပေါ်မုန့်လုံးကို စားသုံးဖို့ဝယ်လျှင်ပင် အလယ်က ထန်းလျက်ဖိုးဟု ငွေတိုး၍ မပေးကြ၊ ထန်းလျက်ပါရသကဲ့သို့ အဝုတ္တသိဒ္ဓိပါဝင်လျက်ရှိသောကြောင့် ဤလေညကီ့ကျေးဇူးမှာ ကျွဲကူး ရေပါ ဖြစ်တော့သည်။" ပုညဝတ်။ ၃၃။
ကျွဲ၏အနားတွင် စောင်းကို မည်မျှပင် သာယာစွာ တီးစေကာမူ ကျွဲအဖို့ အချည်းနှီးသာ ဖြစ်သကဲ့သို့ အကောင်းအဆိုး မသိသူအား တန်ဖိုးရှိသော စကားကို နားဝင်အောင် မည်မျှပင် ပြောကြားစေကာမူ ထိုသူအဖို့ အချည်းနှီးသာဖြစ်သည်။
ကြက်ကန်းသည် စားရကံကြုံသဖြင့် မထင်မှတ်ထားဘဲ ဆန်အိုးကို တန်းတန်းမတ်မတ် ဝင်တိုးမိသကဲ့သို့ အစွမ်းအစမရှိသူသည် ကံစွပ်သဖြင့် မထင်မှတ်ဘဲ အပေါက်အလမ်းတည့်သွားသည်။
တိုက်ကြက်ကောင်းကို ကြိုးနှင့် အမြဲမကွာ ချည်နှောင် စောင့်ရှောက်ထားရသကဲ့သို့ အလားအလာကောင်းသူကို ဂရုစိုက်၍ စည်းကမ်းနှင့် မကင်းမကွာ ထိန်းကွပ်ကြပ်မတ်ထားရသည်။
ကြက်တူရွေးသည် တော်ရုံတန်ရုံမျှသာ စကားပြောတတ်သော်လည်း မော်ဘော်က သူ့ကြက်တူရွေး စကားတတ်ကြောင်း အမွှမ်းတင်ရာတွင် လွန်ကဲ့သကဲ့သို့ တစ်စုံတစ်ယောက်၏ ဂုဏ်အရည်အချင်းမှာ တော်ရုံမျှသာ ဖြစ်သော်လည်း သူ့အား လိုလားသူ၏ အမွှမ်းတင်မှုမှာ လွန်ကဲလှသည်။
ကြက်မသည် သဘာဝအလျောက် တွန်လေ့တွန်ထ မရှိသဖြင့် ကြက်ဖကဲ့သို့ အချိန်မှန်မှန် တွန်၍ မိုးလင်းချိန်ကို ညွှန်ပြခြင်း မပြုနိုင်သကဲ့သို့ မိန်းမသားတို့သည် သဘာဝအလျှောက် အချို့ကိစ္စများ၌ ယောက်ျားကဲ့သို့ အောင်မြင်အောင် မစွမ်းဆောင်နိုင်ချေ။
အရောင်လျော့စေရန် ကြပ်ပူထိုးပေးရာတွင် အရောင်မလျော့ဘဲ ကြပ်ပူထိုးလေလေ ပို၍ ရောင်လေလေဖြစ်သကဲ့သို့ ကောင်းမွန်စေရန် ပြုပြင်ပေးရာတွင် ကောင်းမလာဘဲ ပြုပြင်လေလေ ပို၍ ဆိုးလေလေ ဖြစ်သည်။
"ကံသာစီရင်၊ ကြမ္မာငင် သော်၊ ခုတင်ရွှေ့လစ်၊ လူစင်စစ်လျက်၊ ဆိတ်ဖြစ် ရကြောင်း၊ ထုံးဟောင်းရှေးက၊ မှတ်ဆိုကြ၏၊" မှာပုံ။ ၃၀၁။
မိမိ၏သွား ကြာရှည်စွာ ဝါးနိုင်စေရန် အရိုးကို ဂရုတစိုက် ရှောင်ကြဉ်ရသကဲ့သို့ မိမိဘဝ ကြည်ရှည်စွာ ရပ်တည်နိုင်ရန် ထိခိုက်နစ်နာစေမည့် အမှုမှန်သမျှကို ဂရုတစိုက် ရှောင်ကြဉ်ရမည်။
ကြာကြာ ဝါးမှ ခါးမှန်းသိ ဆိုတာလို ကွန်မြူနစ်တွေနဲ့ပေါင်းကြည့်မှ သူတို့ရဲ့ ညစ်ပတ်.တဲ့ အသွင်သဏ္ဌာန်တွေဟာ တဖွားဖွား ပေါ်ပေါက်လာတာကိုး။" ဒဂုန်၊ ၁၄၅။ ၃၂၅။
ကြိုးချင်းထား ကြိုးချင်းငြိ၊ အိုးချင်းထား အိုးချင်းထိ
ကြိုးများကို စုပုံထားပါက ကြိုးအချင်းချင်း ငြိတွယ် ရှုပ်ထွေးတတ်ပြီး အိုးများကို စုပုံထားပါက အိုး အချင်းချင်း ထိမိခိုက်မိ ရှိတတ်သည်။ ထို့အတူ ယောက်ျားနှင့် မိန်းမသည် နီးစပ်လျှင် ငြိစွန်းသည်။
"မြှောက်ချူ ငယ်ချူ၊ ကြောက်သူကို ကြောင်နှင့်တို့ ပြန်သို့၊ ပူဖို့ တစ်ခန်း၊" ဂျာနယ်ကျော်၊ ၃၊ ၉။ ၁၇။
ကြောက်လျှင် လာဘ်လွဲ၊ ရဲလျှင် မင်းဖြစ် ဆိုသကဲ့သို့ ကြောက်ရွံ့တွန့်ဆုတ်နေလျှင် ရသင့်ရထိုက်သော အကျိုးကျေးဇူးကို မရရှိဘဲ မကြောက်မရွံ့ စွန့်စားအားထုတ်လျှင် အကျိုးထူးကို ရရှိခံစားနိုင်သည်။ ဗာရာဏသီပြည် ဗြဟ္မဒတ်မင်း၏သား ပဉ္စာဝုဓမင်းသားသည် တက္ကသိုလ်ပြည်၌ ...
ခံတွင်းပျက်နေသောကြောင်သည် အလွယ်တကူဖမ်းယူနိုင်မည့် တောင်ပံကျိုးဆက်ရက်ကို အခန့်သားတွေ့သကဲ့သို့ အိမ်ထောင်ရေးတွင် လိုအင်ဆန္ဒမပြည့်ခိုက် မိမိဆန္ဒကို အလွယ်တစ်ကူဖြည့်မိသူနှင့် အခန့်သင့်တွေ့သည်။
ကြောင်တစ်ကောင်ကြောင့် ကြက်တစ်မြုံလုံး ပျက်စီးရသကဲ့သို့ အနိုင်အထက်ပြုသူတစ်ဦးကြောင့် အားမဲ့သူများ ပျက်စီးဆုံးရှုံးသည်။ ရှေးအခါက သူကြွယ်မတစ်ဦးသည် အရွယ်ရောက်လာသော သားအား သင့်လျော်သော အမျိုးသမီးတစ်ဦးနှင့် လက်ထပ်ထိမ်းမြားပေးရာ ကာလအတန်ကြာသည့်တိုင် သားသမ ...
ကြောင်မရှိ က ကြွက်ထ ဟူသော စကားပုံအရ စက်သူဌေး မရှိခိုက်တွင် စက်ထဲရှိ အလုပ်သမားအားလုံးပင် ရယ်စရာမောစရာများ ပြောသူကပြော. ဒဂုန်၊ ၁၉၊ ၂၂၃။ ၉၈။
သူတော်ကောင်းကြောင်ဟု အမည်ခံနေသော်လည်း သူ၏မစင်တွင်မူ ကြွက်မွေးများ တွေ့ရသကဲ့သို့ သူတော်ကောင်း အမည်ခံနေသော်လည်း လုပ်ရပ်များ၌ မရိုးသားသော လက္ခဏာများ တစ်စွန်းတစ်စ တွေ့ရသည်။
ကြွက်သေတစ်ကောင်ကို အရင်းအနှီးပြု၍ ချမ်းသာလာသကဲ့သို့ အနည်းငယ်မျှသော အရင်းအနှီးကိုအမှီပြုလျက် တစတစတိုးပွားလာအောင်ပြုကာ ချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်းအဖြစ်သို့ရောက်ရှိလာသော အဖြစ်အပျက်ကို တင်စားပြောဆိုရာတွင် သုံးသည်။ ဤစကားပုံ၏ ဗျုပ္ပတ် အကြောင်းရင်းမှာ စူဠသေဋ္ဌိဇ ...
ကြွေအန်ကစားသူ၊ ကြက်တိုက်သူတို့သည် အရှုံးပင်ပေါ်နေစေကာမူ ကြွေတစ်လက်ပစ်၊ ခွပ်ကြက် တစ်ခါခုန်ဖြင့် အနိုင်ပေါ်နိုင်သကဲ့သို့ ချက်ကောင်းတစ်ချက်ကြုံလျှင် ချမ်းသာကြီးပွားနိုင်သည်။
စစ်ကိုင်းဆိပ်မှ ဆန်တက်သည့် လှေသည် ခတ်ကွင်းကို ကြိုတင်ပြင်ဆင်မထားသဖြင့် မလှော်ခတ်နိုင်ဘဲ ခတ်ကွင်းပြင်ရင်း ရေစီးနှင့် မျောပါသွားရာ ရွာသစ်ကြီးတိုင် ရောက်သွားသကဲ့သို့ လုပ်ငန်းကို ကြိုတင်ပြင်ဆင်မထားသဖြင့် လုပ်ငန်းစရတော့မည့်အချိန်တွင်မှ ပြင်ဆင်မှုလုပ်ရ ...
ခရမ်းသီးပိန်ကို ဓားတုံးတုံးဖြင့် လှီးလျှင် အလွယ်တကူမပြတ်သကဲ့သို့ ပစ္စည်းဂုဏ်သိန် အရှိန်အဝါ ညှိုးမှိန်နေသောအခါ၌ အရာရာကို ဆောင်ရွက်၍ အလွယ်တကူ မအောင်မြင်နိုင်။
ခါချဉ်ကောင် မာန်ကြီးလို့ တောင်ကြီးဖြိုမည့်ကြံ ခါးကမသန်
ခါချဉ်ကောင်သည် တောင်ကြီးကို ဖြိုဖျက်ရန် စိတ်မာန်ပြင်းပြစွာ ကြံစည်သော်လည်း ခါးချည့်သော သတ္တဝါမျိုးဖြစ်၍ မစွမ်းဆောင်နိုင်သကဲ့သို့ တစ်စုံတစ်ခုကို မဖြစ်မနေ အားသွန်ခွန်စိုက် ပြုလုပ်ရန် ရည်မှန်းသော်လည်း ပင်ကိုအားနည်းချက်ကြောင့် မစွမ်းဆောင်နိုင်ဖြစ်သည်။
ရေတွင်းတူးပြီးလျှင်ပြီးချင်း ရေကြည်ကို သောက်ချင်သကဲ့သို့ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပြီးနောက် သင့်လျောသော အခါကာလထိအောင် မစောင့်ဆိုင်းနိုင်ဘဲ ချက်ချင်း အကျိုးခံစားချင်သည်။
ခေါင်းသွားလျှင် အမြီးပါရစမြဲ ဖြစ်သကဲ့သို့ လုပ်ငန်းတစ်ခုတွင် ရှေ့က ဦးစီးခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူ ပါဝင်ပတ်သက်ပါက နောက်လိုက်ငယ်သားများလည်း အလိုလို ပါဝင်ပြီး ဖြစ်သွားသည်။
ခဲမှန်ဖူးတဲ့ စာသငယ် ဟူသည်မှာ မြန်မာစကားပုံတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ခဲမှန်ဖူးသော စာသငယ်သည် လူကို မြင်တိုင်း လန့်နေသကဲ့သို့ ဒုက္ခရောက်ဖူးသူသည် အန္တရာယ်အရိပ်အယောင် တွေ့တိုင်း ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သည်။
ချောင်းကို ပစ်၍ မြစ်ကို ရှာ၊ ရေသာ များ၍ ငါးမတွေ့
ချောင်းကို ငယ်သည်၊ ကျဉ်းသည်၊ ငါးအရနည်းသည်ဟု စွန့်ခွာပြီး မြစ်တွင် ငါးရှာရာ ရေသာများပြီး ငါးမရ သကဲ့သို့ မိမိ၏ လက်ရှိအရာကို ကောင်းသည်ဟု မယူဆဘဲ အသစ်ကို ရှာဖွေရာ ဒုက္ခသာများ၍ အကျိုးမရဖြစ်သည်။
ခွေးတောက်မြစ်ယှက်၊ စိုက်ရောဖက်က၊ သရက်ပင်မင်း၊ သီးချိုကင်း၏
ခွေးတောက်မြစ်နှင့် သရက်ပင်ပင်အမြစ်တို့ ရောယှက်စိုက်သဖြင့် သရက်သီးတွင် အချိုအရသာကင်းပြီး အခါးအရသာ ဖြစ်လာသကဲ့သို့ နီးစပ်ရာ၏ ဓလေ့စရိုက် ကူးစက်သည်။ တစ်နေ့သ၌ ဒဓိဝါဟအမည်ရှိသော မင်းသည် မြစ်အတွင်း၌ ရေကစားစဉ် နတ်တို့သုံးဆောင်သော သရက်သီးတစ်လုံးသည် မြစ်ရေတွ ...
ကောက်နေသော ခွေးမြီးကို ဖြောင့်စေရန် ကျည်တောက် စွပ်ပေးထားသော်လည်း ကျည်တောက် ချွတ်လိုက်သောအခါ ကောက်မြဲတိုင်း ပြန်ကောက်သကဲ့သို့ နဂိုဗီဇအားဖြင့် ဆိုးသူကို မည်မျှပင် ပြုပြင်ပေးသော်လည်း အခိုက်အတန့်မျှသာ ကောင်း၍ ဆိုးမြဲတိုင်း ပြန်ဆိုးသည်။
ငရဲတွင် ငရဲမီး၏ အပူကို ခံစားဖူးသူသည် ပြာပူမျှလောက်ကို မကြောက်တော့သကဲ့သို့ ကြီးမားသော ဒုက္ခကို ခံစားဖူးသူသည် သာမန်ဒုက္ခမျိုးကို မကြောက်တော့ချေ။ အခြားဆိုလိုရင်းတစ်ခုမှာ ငရဲတွင် ငရဲမီး၏ အပူကို ခံစားဖူးသူသည် ပြာပူမျှလောက်ကို မကြောက်တော့သကဲ့သို့ ကြီးမ ...
မိတ္တဝိန္ဒကမည်သော လူငယ်သည် မိမိအား ညှဉ်းဆဲသတ်ဖြတ်မည့် သင်တုန်းစက်ကို ရွှေပန်း ထင်မှတ်၍ လိုချင်တောင့်တမိသကဲ့သို့ မိမိအား ဒုက္ခပေးမည့်အရာကို အကောင်းထင်မှတ်၍ မက်မောသည်။ ကဿပဘုရားလက်ထက် ဗာရာဏသီပြည်၌ သူဌေးတစ်ဦးတွင် မိတ္တဝိန္ဒက အမည်ရှိသော သားရှိ၏။ အဖသူဌ ...
ဆင်လည်း ဆင့်အထွာနှင့်၊ ပုရွက်ဆိတ်လည်း ..
ညောင်ဦးကမ်းပါးပြို၊ စမ္ပာနဂိုရ်က နွား ..
တစ်တောစောင့်သည် ခြေတိုင်ကုပ်ကား၊ တစ်အ ..
တိုင်း၍ရက်သည့် ပက္ကလာ မိုးရွာသည်နှင့် ..
တောင်ကြီး ဖဝါးအောက်၊ လှိုင်းကြီး လှေအ ..
တောင်ငူကလည်း တောင်ငူ၊ မောင်းထောင်ကလည် ..
၁၉၆၁ အရှေ့တောင်အာရှကျွန်းဆွယ် အားကစား ..
၁၉၆၉ အရှေ့တောင်အာရှကျွန်းဆွယ် အားကစား ..